रवी लामिछानेले शालिकरामलाई यस्तो सम्म गरेका रहेछन् ! बाहिरियो शालिकरामको गोप्य भिडियो (भिडियोसहित)::Leading Digital News Portal Of State7| Political News, Science, Social, Sport, Economy, Business, Entertainment
रवी लामिछानेले शालिकरामलाई यस्तो सम्म गरेका रहेछन् ! बाहिरियो शालिकरामको गोप्य भिडियो (भिडियोसहित)
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा एक भिडियो टेप बाहिरिएको छ । उक्त भिडियोमा मृतक पुडासैनीले आफुले आत्महत्या गर्नुको कारणबारे भनेका छन् । भिडियोमा पुडासैनीले आफुले किन आत्महत्या गरे ? आत्महत्या गर्न के केले भूमिका खेल्यो लगायतका कुराहरु भनेका छन् ।
सार्वजनिक भिडियोमा पुडासैनीले सिधा कुरा जनतासँगका सञ्चालक रवी लामिछाने लगायत अन्य दुई जनाको नाम लिएका छन्, जसमा एउटा युवतीको नाम पनि जोडिएको छ । भिडियोमा पुडासैनीले उनीहरु तीनै जनालाई मृत्युदण्ड दिएपछि मात्रै आफ्नो आत्माले शान्ति पाउने समेत बताएका छन् ।